Ho an’ny EPP sy ny CEG ary ny Lycée : Ivontoerana efatra no hitsinjara ny « caisse école » - ewa.mg
Ho an’ny EPP sy ny CEG ary ny Lycée : Ivontoerana efatra no hitsinjara ny « caisse école »
News - Ho an’ny EPP sy ny CEG ary ny Lycée : Ivontoerana efatra no hitsinjara ny « caisse école »
Tanteraka omaly ny
fifanaovan-tsonia teo amin’ny mpiara-miombon’antoka efatra sy ny
minisiteran’ny Fa­na­beazam-pirenena : BNI, Paositra Malagasy,
Première Agence de Microfinance, Volamahasoa. Tanjona amin’izany ny
hametrahana ny fiaraha-miasa madio eo amin’ny fitsinjarana ireo «
caisse école » natao hanampiana ireo EPP, CEG ary Lycée manerana ny
Nosy. Izy ireo no hiandraikitra ny fandefasana ny vola « caisse
école » any amin’ny « compte » ny FEFFI avy ao amin’ny
kitapom-bolan’ny fanjakana foibe ka hanaparitaka izany manerana ny
Nosy. Tanjona ny hisian’ny mangarahara sy fitantanana madio ary
manaja ireo fepetra arahina amin’ny fitantanam-bola satria
volam-bahoaka ny «caisse école ». Arahi-maso ny fandaniana azy ary
efa voasoratra mazava araka ny lalàna ny zavatra azo ampiasana azy.
Tsy main­tsy mitsangana ara-dalàna ny biraon’ny FEFFI hitantana ny
sora-bola ary nisy ny fanadihadiana teny ifotony nanamarina ny
vaovao rehetra. Ho an’ny lycée manokana, nofoanana ny conseil
d’établissement izay mitantana ny tetibola manokana azy ireo teo
aloha ary novana ho FEFFI ihany koa. Eo am-pananganana izany ny
tomponandraikitra amin’izao fo­toana izao, araka ny fanazavan’ny
minisitry ny Fana­beazana, Sahon­drarimalala Marie Michèle.
Mahatratra 26 800 ny EPP manerana ny Nosy raha 13400 ny CEG.
Nanatanteraka ny fanavan-tsonia ny tale jeneralin’ny pedagojia eo
anivon’ny mi­nisiteran’ny Fanabeazana, Raoni­herijaona
L’article Ho an’ny EPP sy ny CEG ary ny Lycée : Ivontoerana efatra no hitsinjara ny « caisse école » a été récupéré chez Newsmada.
Anzojorobe : Takalon’aina 3 votsotra, iray novonoin’ny dahalo
Rangahy iray no maty, olona telo votsotra teo am-pelatanan’ireo dahalo naka an-keriny, tany amin’ny distrikan’Anjozorobe. Io no vokatry ny fifandonana nafana nifanaovan’ny tafika sy ny dahalo avy nanatanteraka fanafihana niaro fakana takalon’aina, tany amin’ny fokontany Marotsipohy distrikan’Anjozorobe, ny faran’ny herinandro lasa teo. Nirotsahan’ny tafika an-tsehatra ny fanavotana ireto takalon’iana miisa telo, izay nalain’ny dahalo niaraka tamin’ny omby miisa 210. Araka ny loharanom-baovaon’ny sampana seraseran’ny tafika dia ny talata lasa teo izy ireo no nanao fikarohana ny toerana nitondran’ireto dahalo ireto olona natao takalon’aina. Tamin’ny alalan’ny antso an-tarobia nataon’ireo farany moa no nahalalana fa mitaky vola 2 tapitrisa ariary ireto olon-dratsy. Raha ny zava-nisy dia ny faran’ny herinandro lasa teo no nitrangan’ny fanafihana omby tao amin’io fokontany voalaza etsy ambony io, ka voaroba tamin’izany ny omby, miaraka amin’ireto takalon’aina efadahy. Nanao ny fanarahan-dia avy hatrany ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona, nitsirihana ny toerana nitondran’ireto mpanafika ny olona. Tamin’izany no nahalalana ny toerana nitobian’ireto farany niaraka tamin’ireo nalaina an-keriny, ka raikitra ny vela-pandrika. Vantany nahatsikaritra izany ireo dahalo fa nanara-dia azy ny fokonolona, ka avy dia nitifitra, ary lavo ny raim-pianakavina iray. Votsotra ihany koa ireo omby halatra rehetra, fa ny olona telo ambiny kosa mbola nentin’izy ireo nandositra ihany. Narahan’izy ireo tifitra ihany anefa izany, saingy tsy nahatohitra ireo miaramila nanao ny fanenjehana izy ireo, ka dia namotsotra ireo olona nalainy. Vokany olona enina no azo sambo-belona, raha toa ka mbola tafaporitsaka ny ireo namany. Sarona tamin’izany ny fitaovam-piadiana mahery vaika toa ny basy lava fampiasan’ireto olon-dratsy. Valérie R. L’article Anzojorobe : Takalon’aina 3 votsotra, iray novonoin’ny dahalo est apparu en premier sur .L’article Anzojorobe : Takalon’aina 3 votsotra, iray novonoin’ny dahalo a été récupéré chez Triatra.
FIKAMBANANA SAINA: Miantso ny tanora manana vinavinan’asa
Andro lehibe ho an’ny fikambanana SAINA ny 29 jolay 2019. Notolorana tamin’io alatsinainy io ny valisoa ho an’ireo tanora manana vinavinan’asa mendrika indrindra tamin’ny fifaninanana vinavinan’asa sy fihariana vaovao. 30 no nandray anjara ka ny enina tamin’izy ireo no voasafidy hahazo ny 500 euros na 2.000.000 Ariary isan’olona. Ho entin’izy ireo hiaingana amin’ny fanatanterahana ny tetikasan’izy ireo io famatsiam-bola avy amin’ny fikambanana SAINA io. Nambaran’ny filohan’ny mpitsara tamin’ny fifaninanana, Ramambazafy Andrianasolo fa avy amin’ny faritany enina eto Madagasikara ireo tanora nomena valisoa ireo. Miompana amin’ny fanodinana fako, fambolena biolojika, fiompiana zana-trondro ny tetik’asan’izy ireo. Mason-tsivana efatra kosa no napetraka nifantenana ireo vinavinan’asa ka ao anatin’izany ny fikarohana, ny fanavaozana, ny fanajana ny tontolo iainana, fitombenan’ny vinavina (mety hiteraka asa) ary ny fomba hanitarana azy. Tsy hijanona hatreo ny fanampian’ny fikambanana ireto tanora ireto fa mbola hanara-maso azy ireo mandra-pahatanteraky ny vinavinan’asany, amin’ny alalan’ny fanomezana toro-lalana amin’ny lafiny lalàna, lafiny teknika fa indrindra fitadiavana famatsiam-bola, hoy ny filohan’ny fikambanana Andriamihamina Felana. Mbola nanome fanazavana ihany koa Ramambazafy Andrianasolo fa rehefa mahaleo tena sy hita fa matanjaka tsara ny orinasan’izy ireo dia tsofina rano. Laharam-pamehana ho an’ity fikambanana ity ny fampananan’asa ny tanora malagasy. Noho izany, antsoina avokoa izay rehetra manana tetikasa fa vonona hanampy tosika azy ireo ny mpikambana ao amin’ny SAINA. Lynda A. Cet article FIKAMBANANA SAINA: Miantso ny tanora manana vinavinan’asa est apparu en premier sur déliremadagascar.
Mbola mitohy amin’izao ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Mandra-pahoviana? Miankina amin’ny atao ihany io: ny tsirairay miaraka no daholobe… ho mpandresy. Miady hatrany ny tena, raha mbola tsy resy ny valanaretina: tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny tranga vaovao mitondra tsimokaretina; eny, na be lavitra aza ny marary sitrana no ho izay mbola tsaboina.Farafaharatsiny amin’izay ady izay, afa-miaina andavanandro amin’ny valanaretina toy ny amin’ny areti-mifindra hafa, ohatra, ny tena, araka ny filazan’ny sasany azy? Mbola mafy ny ady, sarotra. Tsy ady amin’ny fihanaky ny valanaretina ihany no atrehina amin’izao lazon’ady izao, fa eo indrindra koa adim-piainana andavanandro. Tsy misy tsy sahirana amin’izao fa mafy ny fiantraikan’ny fepetra?Na izany aza, tsy maintsy atrehina ny fisorohana sy fitsaboana ny fihanaky ny valanaretina. Miady hatrany ihany amin’izao lehibe iombonana izao; eny, na refona sy noana aza, na sahirana aza. Mila hasiana vidiny sy hasiny ny fiaretana nandritra izay efa-bolana mahery izay: fahafoizan-tena, fotoana, fitadiavana… Nampiombona ny Malagasy izany mba tsy hitondra ho amin’ny fisarahana aty am-parany.Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy hisy farany izao fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana izao. Raha izao, sanatria, no tamoraina na anaovana mosaly ny fiatrehana ny izany, ho faty antoka iray lavaka fa hihahaka sy hihanaka ny aretina. Izay no iaretana sy aharetana amin’izao ady lehibe iombonana izao. Tsy mbola vita tanteraka tsinona ny ady tokony hampiombona hatramin’ny farany.Azo arenina ihany atsy ho atsy ny fitadiavana, na misy aza no tonga amin’ny fitenenana hoe: tsy matin’ny aretina ny vahoaka sahirana amin’izao, fa matin’ny hanoanana. Tsy efa misy ezaka amin’ny karazana fanampiana fanamaivanana fahasahiranana? Eny, na tsy mahafa-po aza, tsy mahahenika ny rehetra, tsy maharitra. Mila ezaka koa ny ady amin’ny aretina raha tiana hifarana? Na refona aza, tsy milavo lefona…Rafaly Nd. L’article Refona… tsy milavo lefona a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – « diviziona nasionaly1 »: hanao famaranana ny Fosa Juniors sy ny As Adema
Hiady ny anaram-boninahitra ho tompondaka 2019 ny Fosa Juniors élite avy any amin’ny ligin’i Boeny sy ny As Adema avy amin’ny ligin’Analamanga, taranja baolina kitra. Manana isa 14 ny ekipan’i Bob Kootwijk raha isa 12 kosa ny an’ny ekipan’i Jhonny. Miendrika lalao famaranana ny hitranga amin’ny andro fahafito farany, hihaonan’ny As Adema sy ny Fosa Juniors, hatao etsy Mahamasina, ny alahady 9 jona. Tsy maintsy mitady fandresena ny As Adema raha te hahazo ny amboara. Ampy ho an’ny solontenan’i Boeny ny ady sahala. Raha hiverenana ny voka-dalao, nivoaka ho mpandresy tao Tsiroanomandidy, tamin’ny isa 1 no ho 0 ny As Adema nifandona tamin’ny Ajesaia. Nahatafiditra io baolina tokana io i Aro ho an’ny ekipan’ny seranam-piaramanidina.Resy ny CNapsTany Mahajanga indray, nandresy tamin’ny isa 2 no ho 1 ny Fosa Juniors nanoloana ny CNaPS Sport. Vao roa minitra monja nanombohan’ny fihaonana, efa nahatafiditra baolina ny FJE, tamin’ny alalan’i Santatra. Namaly ny tompondakan’Itasy avy eo, saingy narian’i Tendry izany baolina tsara azony izany. Taty amin’ny minitra faha-29, nahazo “penalty” ny Fosa Junior, rehefa voafingan’i Ando kapiteny tao anaty faritra tsy azo ivalozana i Besna. Tsy nihambahamba i Baggio teo nampiditra ny baolina ary io isa 2 no ho 0 io no nentina niala sasatra. Taty amin’ny minitra faha-59 nilalaovana kosa ny nahatafiditra ny baolina tokana ho azy ny CNaPS Sport tamin’ny alalan’i Lalaina. Nisaraka 2 no ho 1 io ny roa tonta.Mi.Raz L’article Kitra – « diviziona nasionaly1 »: hanao famaranana ny Fosa Juniors sy ny As Adema a été récupéré chez Newsmada.
Nisokatra, omaly, ny atrikasa izay nomena ny lohahevitra « Ny lalana fampandrosoana nodiavin’i Sina sy ny fifandraisany amin’i Madagasikara ». Nikarakara izany ny Ivontoerana fianarana politika eto Madagasikara, noho ny faha -40 taona nisokafan’i Sina amin’ny any ivelany. « Ahoana ny nahatongavan’i Sina amin’izao fandrosoana misy azy izao sy ny traikefany ? Azo antoka fa mahaliana ho an’izay rehetra mihevitra ny tena fampandrosoana ho an’i Madagasikara ireo fanontaniana ireo », hoy ny ambasadaoro, Rtoa Yang Xiaorong. Koa nampahalalana tamin’io fotoana io ny traikefa azon’i Madagasikara alain-tahaka. 9,5 % isan-taona ny fisondrotry ny harinkarem-pirenena ; ny fari-piainan’ny Sinoa, raha 200 dolara isan’olona nanomboka ny taona 1978, tafakatra 8.800 dolara izany ny taona 2017. Ireo mpikambana vaovao ao anatin’ny filankevi-pitantanan’ny Jirama avy amin’ny minisitera samihafa : Ramarolahy Christian (Primatiora), Jaosolo Gelase (Toekarena sy ny tetipivoarana), Randrianarison Valéry Leroy (Indostria sy ny sehatra tsy miankina), Rakotomanga Soloalitiana (Varotra sy ny fanjifana), Andriantahina Tsiry (Angovo sy ny akoranafo), Raselison Julien Mamiarivao (Rano), Rabialahy Jean Rostand (noho ny traikefa ananany manokana). L’article Vaovao tambatra a été récupéré chez Newsmada.
Rugby: nigadona teny Ivato omaly ny Makis vehivavy
Tafaverina eto an-tanindrazana, omaly hariva, ireo mpilalao Makis vehivavy, nanaraka fiofanana nandritra ny 10 andro tany Gujo any Japana, nanomboka ny 15 jona lasa teo.Traikefa maro ny azon’izy 12 mirahavavy, nandritra ity fiofanana ity, ary hoentina hanatsara ny teknika efa ananana izany, raha ny fanazavana nentin’i Sariaka, isan’ireo nisitraka izany. “Tsy ho lohany eto Afrika ihany no tanjona ho an’ny Malagasy rugby fa ny hiatrika ny “Lalao olympika” sy ny fiadiana ny tompondaka eran-tany mihitsy”, hoy ny nohamafisin-dRakotomalala Marcel, filohan’ny federasiona malagasy ny rugby, nandritra ny fitsenana ireto Makis vehivavy ireto, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, omaly hariva. “Mafimafy ny kotrana tany Japana ary sahirana mihitsy ny Malagasy tamin’ny andro voalohany, saingy nihazatra teny rehefa nitohy ny fampiofanana”, hoy ny kosa ny mpanazatra, andriamatoa Eric.Ho feno ny fandaharam-potoanaTsy misy ny fakana aina ho an’ireto mpilalao vao avy niatrika fiofanana ireto fa miomana avy hatrany sahady amin’ny lalao hihaonana amin’ireo firenena rahavavy, ao anatin’ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina, hotanterahina anio sy rahampitso 29 jona, eny amin’ny kianja an’Alarobia sy ny kianjan’i Pedro eny Andralanitra. Tsahivina fa firenena efatra ny hifaninana amin’izany, ahitana ny Mayotte, i La Réunion, i Maurice ary i Madagasikara. Tohin’ny fandaharam-potoanan’ny Malagasy rugby, handray ny andiany voalohany amin’ny “Tana 7’s International” i Madagasikara, ny 10 hatramin’ny 15 jolay ho avy izao, handraisan’ireo firenena rahavavy anjara ihany koa. Aorian’izay, hiatrika ny “Lalaon’ny Nosy” ny ekipa malagasy, ny 18 sy 19 jolay izao any Maorisy. Hitohy any Afrika Atsimo ny fifaninanana iraisam-pirenena handraisan’i Madagasikara anjara, ao anatin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, rugby à XV. Hiady ny tapakila hiatrehana ny “Lalao olympika” 2020 any Tokyo, ao anatin’ny fiadiana ny amboaran’Afrika hatrany, ho an’ny rugby lalaovin’olona fito vehivavy kosa ny ekipa malagasy ny 10 hatramin’ny 14 aogositra any Tonizia. Ny 6 hatramin’ny 10 novambra any Afrika Atsimo no hanaovana izany, ho an’ny sokajy lehilahy, handraisan’ny firenena miisa 14 anjara. Hofaranana amin’ny “Rugby Africa Cup”, ny 1 desambra, ny fandaharam-potoana amin’ity taona ity. Lalao hatao eto Antananarivo, hiadiana ny tapakila hiatrehana ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, hifandonan’i Madagasikara sy i Nizeria.Mi.RazL’article Rugby: nigadona teny Ivato omaly ny Makis vehivavy a été récupéré chez Newsmada.
Espoirs Sportifs de Tuléar: asa maro no efa vita sy mbola hatao
Mitohy hatrany ny fampandrosoana ataon’ny fikambanana Espoirs Sportifs de Tuléar, eo amin’ny lafin’ny ara-panatanjahantena ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Asa maro ny efa vita sy mbola hokasaina atao. Vaovao mahafaly voaray, omaly, vita soa aman-tsara ny kianja basikety Sanfil, izay namboarin’ny fikambanana EST sy novatsiny vola. Naharitra 10 andro ny faharetan’ny fanamboarana, nanomboka tamin’ny herinandro lasa iny. Mbola miankina amin’ny taratasy fahazoan-dalana kosa ny fanavaozana ny kianjan’Anketa, izay nitondran’ny filohan’ny fikambanana EST, i Vital Serge, fialan-tsiny ho an’ireo tanora any an-toerana, noho ny tsy mbola fahavitan’izany.Tafatsangana ny JeuestAnkoatra ny fanavaozana ny kianja, miroso hatrany koa ny fananganana klioba, taorian’ny RCEST (Rugby Club Espoirs Sportifs de Tuléar), tafatsangana tamin’ity herinandro ity koa ny Jeuest (Jeunes Étudiants Universitaires EST). Famaliana ny hetahetan’ireo mpianatra no nananganana ity klioba ity.Hetsika maro no mbola miandry ny fikambanana ary efa an-dalam-pikarohana ny hoenti-manana amin’izany ny mpitantana. Isan’izany ny fifaninanana « multi-sports » hatao amin’ny novambra sy desambra izao, eo ihany koa ilay « soirée » kasaina hotanterahina amin’ny faran’ny volana novambra. Hanampiana ireo kliobany amin’ny fifaninanam-pirenena ho avy ireo hetsika fitadiavam-bola ireo.Marihina, vonona hiara-kiasa amin’ny rehetra ny fikambanana EST, amin’ny fampandrosoana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsiahivina, efa tafakatra 30% ny mpikambana taorian’ny fanakambanana ny EST sy ny COSTM ka efa mahatratra 400 ireo atleta ao aminy.Mitohy ny fanatsarana ary tanjona ny hampiroborobo ny tanora, tsy ao Atsimo Andrefana ihany fa manerana an’i Madagasikara, hoy ny filohan’ny EST, i Vital Serge. Manentana kosa izy ny mba hanajana sy hitandremana ny fotodrafitrasa rehetra hatsangana.Mi.RazL’article Espoirs Sportifs de Tuléar: asa maro no efa vita sy mbola hatao a été récupéré chez Newsmada.
Manja: lehilahy niharan’ny vonoan’olona feno habibiana
Nitrangana vonoan’olona feno habibiana tany Manja, ny alakamisy alina teo. Maty tamin’izany ny raim-pianakaviana iray antsoina hoe Langomana. Nandray avy hatrany ny andraikiny ny polisy miasa ao Manja tamin’ny fikarohana ireo jiolahy tompon’antoka amin’izao vonoan’olona feno habibiana izao. Nisy ny fitsirihana ny razana niaraka amin’ny mpitsabo. Nahitam-bokany izany satria ny zoma no tratran’ny polisy ny iray amin’ireo jiolahy tompon’antoka amin’izao vonoan’olona izao. Tratra tany aminy koa ny lefona namonoana ity raim-pianakaviana ity. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Hatolotra ny fampanoavana ao Morombe ny raharaha.J.CL’article Manja: lehilahy niharan’ny vonoan’olona feno habibiana a été récupéré chez Newsmada.
CPC Ivato: miomana sahady amin’ny fiavian’ny fahavaratra
Vonjy aina an-tanety, fanokafan-dalana ary fanavotana traboina anaty rano. Ireo ny votoatin’ny fiofanana natrehin’ireo mpamonjy voina miisa 40 ao amin’ny Tafika nandritra ny herinandro ka nifarana ny zoma lasa teo teny amin’ny vondron’ny vonjy voina eny Ivato (CPC). Nandritra ny lanonam-pamaranana ny fiofanana, nisy ny fanehoana traikefa vao norantovin’ireto mpamonjy voina ireto. Nanatrika izany ny lehiben’ny etamazaoron’ny Tafika, ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude, notronin’ireo manamboninahitra isan-tsokajiny. Nohamafisin’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika fa hampitomboina ny ambaindain’ny CPC ka hisy ny “bataillon” roa hisahana izany, araka ny voasoritra anatin’ny fanavaozan-drafitra ampiharina ao amin’ny Tafika. Hisy koa ny fanofanana mpamonjy voina miisa 100 ny faran’ny volana novambra izao ka izy ireo indray no hanaparitaka ny traikefa any amin’ny faritra telo manamorona ny morontsika Atsinanana. Hisy ny ao Sambava amin’ny faritra avaratra, hisy ny ao Toamasina amin’ny faritra Atsinanana ary hisy ny ao Manakara ho an’ny faritra atsimo. Notolorana mari-pahaizana ireo mpamonjy voina nahavita fiofanana.Jean ClaudeL’article CPC Ivato: miomana sahady amin’ny fiavian’ny fahavaratra a été récupéré chez Newsmada.
Lany ny tahirin’ny mpivarotra: tafakatra 950 Ar ny kapoakan’ny vary any Androy
“Efa tafakatra 950 Ar kapoakan’ny vary any amin’ny faritra Androy amin’izao fotoana izao nefa vary tsy manana kalitao tsara akory, 500 Ar kosa ny katsaka iray kapoaka raha 120 Ar amin’ny andavanandro”, hoy ny tomponandraikitry ny Vovonan’ny firaisamonim-pirenena miasa ho an’ny fanjarian-tsakafo Hina any Androy, i Ndrohiza Odile. Anisan’ny mandray anjara amin’ny fanisana ireo tena marefo ny mpikambana amin’ny Vovonana amin’izao fotoana izao ka mitety trano. Ny zavatra tsapa, ny mpiasam-panjakana sy ireo miasa amin’ny tetikasa matanjaka ihany sisa tsy marefo fa miantraika amin’ny sarambabem-bahoaka ny fahasahiranana. Noho ny tsy fisian’ny orana tao anatin’ny herintaona, maty avokoa ny voly nantenaina hiakatra ka ifampitadiavana ny sakafo eny an-tsena. Vary sy katsaka avy any Taolagnaro ny mamatsy ny tsena ka lany ny tahirin’ny mpivarotra ankehitriny. Efa niditra an-tsehatra ny mpiray ombon’antoka toy ny Pam, ny Unicef sy ny Ofisim-paritra misahana ny fanjarian-tsakafo (ORN) nitondra sakafo ho an’ireo tena marefo. Raha tiana hivaha ny olana ka tsy hiverina isan-taona ny tsy fahampian-tsakafo any Androy, ny fahazoana rano hambolena sy hampiasaina isan’andro ary ny fanamboarana ny lalana mampifandray ny kaominina sy ny distrika rehetra no tokony himasoana, araka ny heviny. Misy ny soso-kevitra hitarihana ny reniranon’Ifaho ho an’ny Androy izay mety ho lafo sy haharitra an-taony vao ho tanteraka. Vahaolana akaiky ny fanaovana vovo isam-pokontany ahafahan’ny fikambanam-behivavy miasa sy mivelona milamina.Vonjy AL’article Lany ny tahirin’ny mpivarotra: tafakatra 950 Ar ny kapoakan’ny vary any Androy a été récupéré chez Newsmada.
Hakan’ny depiote fanapahan-kevitra: Minisitra telo teo aloha nanodinkodim-bolam-panjakana
Am-perinasa tanteraka ilay vaomiera misahana ny fitsarana avo eo anivon’ny Antenimierampirenena amin’izao fotoana izao. Nambaran’ny filohan’ny vaomiera, ny depiote Tsabotokay Honoré fa voasaringotra amin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana sy hosoka, fanaovana hosoka ary koa kolikoly amin’ny tolobaro-panjakana ireo minisitra telo teo aloha ireo. Eo koa ny asa tsy vita nefa ny vola lany. « Ahitana minisitra tamin’ny fitondrana Tetezamita sy ny fitondrana teo aloha izy ireo. Hiakatra eo amin’ny fivoriana azon’ny besinimaro atrehina, amin’ny 17 novambra ny momba azy ireo. Handatsa-bato ny amin’ny hampiakarana azy ireo na tsia eny amin’ny Fitsarana avo natao ho an’ny mpitondra ambony (HCJ) ny depiote amin’io fotoana io ary ho fantatry ny rehetra eo koa ireo minisitra ireo », hoy izy raha nantsoina an-telefaonina, omaly. Nanteriny fa miasa hatrany ny eo anivon’ny vaomiera mandra-pahatonga izany daty izany amin’ny alalan’ny fanadihadiana sy fiantsoana ireo minisitra ireo. Na eto an-tanindrazana na any ivelany, araka ny nambarany.Tsy handray baiko avy amin’iza na avy amin’izaTsy vitan’izany fa tsy maintsy hovitain’ny vaomiera amin’izao fivoriana ara-potoana izao ireo minisitra miisa sivy teo aloha, ambiny anisan’ny ahina ho nanao ny tsy mety teto amin’ny firenena koa.«Hitsara araka ny feon’ny fieritreretanay izahay ary tsy handray baiko na avy amin’iza na iza », hoy ihany ny filohan’ny vaomiera, ny depiote Tsabotokay Honoré.Araka izany, hitodika eny Tsimbazaza izany izao ny mason’ny mpanara-bavaovao ato ho ato, manolona ny fanenjehana ireo mpitantana teo aloha, ahina ho nanodinkodim-bolam-panjakana.Synèse R.L’article Hakan’ny depiote fanapahan-kevitra: Minisitra telo teo aloha nanodinkodim-bolam-panjakana a été récupéré chez Newsmada.
Feno tanteraka izao ireo orinasa mandray antoka ny handrakofana tara manontolo ny lalam-pirenena faha-44 avy Moramanga hatrao Ambatondrazaka. Am-perinasa, nanomboka ny 23 oktobra teo, ny orinasa sinoa China Road and Bridge Corporation (CRBC) voaray hanatontosa ny ampanhany farany, miala avy ao Amboasary (PK 60) ka hatreo Vohidiala (PK 133), tanàna nisehon’ny orinasa hanatanteraka ny asa, tamin’ny filohan’ny Repoblika. « Hisy tetezana lehibe iray vaovao hatao…65 miliara Ariary ny vidin’ny asa rehetra hatao », hoy ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, Andrianainarivelo Hajo, raha nandray ny filoham-pirenena, nanatrika ny fiantombohan’ny asa.Ho 8,40 metatra ny sakan’ny làlana amin’ny faritra mamakivaky tanàna, ary ho 8,60 kosa ny sisa. Ho ao amin’ny PK 87 no hisy toby foibe. « Somary vitsy ny toerana azo hakàna vato any amin’iny toerana iny: enina aloha ny efa hita hatreto… Tsy hovaina ny soritra (tracé) ankehitriny, mirefy 73 km, io », hoy ny teknisianina sinoa tafaresaka taminay.Orinasa za-draharaha ny CRBC.”Efa maro ny asa vitan’ny CRBC aty Afrika, hoy ny filoha Rajoelina Andry: « Ny hafatra: ny asa ataontsika eto, mba ho zavatra matanjaka, manaraka ny fenitra. Mba hipetraka holovain-jafy. »Naverimberiny izay raha nitokana ny seranam-piaramanidina nohatsaraina eny Feramanga Avaratra, ny sekoly manara-penitra ao Ambatondrazaka. Teo amin’ireo tetezana roa an-dalam-pahavitàna: ny « Tetezan’ny kafe » sy ny “Nanaingazipo”, taloha izay nomen’ny filoham-pirenena anarana hoe “Tetezan’ny Fihariana », manomboka izao.RarivoL’article RN44 horakofana tara : manomboka ny ampahan’ny asa farany a été récupéré chez Newsmada.